विद्युतीय गाडी चार्जिङ स्टेसन राख्न राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सिंहदरवारसम्म जग्गा खोज्दै प्राधिकरण
शिव सत्याल काठमाडौं, २४ भदौ
विद्युतीय सवारी साधानको प्रयोग बढ्न थालेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण देशभर चार्जिङ स्टेसन बनाउन जुटेको छ ।
चार्जिङ स्टेसन बनाउनको लागि प्राधिकरण सार्वजनिक जग्गा खोज्न लागेको छ । पछिल्लो समय अतिविशिष्ट (भीभीआइपी) ले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्न थालेपछि प्राधिकरण राष्ट्रपति कार्यालयदेखि सिंहदरवार र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कार्यालयसम्ममा जग्गा खोज्न लागेको छ ।
चाजिङ स्टेसन राख्नको लागि राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरवार तथा सीडीओ कार्यालयहरुसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न लागिएको प्राधिकरणका इन्जिनियर प्रमोद रिजालले जानकारी दिए ।
‘चार्जिङ स्टेसन राख्नको लागि प्राधिकरणसँग जग्गा छैन, सर्वसाधारणको धेरै आउजउ हुने र पहुँच पनि सहज हुने ठाउँ खोजिरहेका छौं, भीभीआइपीका गाडी चार्जिङका लागि राष्ट्रपति कार्यालय, सिंहदरवार वा सीडीओ कार्यालय हुन सक्छ कि भनेर छलफल गर्ने सोच बनाएका छौं,’ इन्जिनियर रिजालले शिलापत्रसँग भने ।
देशभर चार्जिङ स्टेसन राखिने
प्राधिकरणले देशभर ५० स्थानमा चार्जिङ स्टेसन राख्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । इन्जिनियर रिजालका अनुसार एक ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्न करिब १ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । यसरी ५० ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन राख्नको लागि झण्डै ५० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ ।
यस्ता चार्जिङ स्टेसन देशका सातै प्रदेशका प्रमुख शहरमा तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको आसपास राखिने रिजालले जानकारी दिए । चार्जिङ स्टेसन बनाउनको लागि प्राधिकरणले टेण्डर माग्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा २ वटा र काठमाडौं उपत्यकामा २० वटा जति चार्जिङ स्टेसन बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ ।
‘अबको १० दिन भित्रमा टेण्डर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छौं, टेण्डर निकाल्नेदेखि चार्जिङ स्टेसन बनाउने सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा अबको डेढ बर्षभित्रमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनिसक्छन्,’ रिजालले भने ।
सिनेमा हल र सपिङ मलमा पनि बनाउन मिल्ने
प्राधिकरणले सपिङ मल, सिनेमा घर, अस्पताल, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय हरेको ठाउँ, पार्टी प्यालेस जस्ता सार्वजनिक स्थलहरुमा चार्जिङ स्टेसन बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको छ । चार्जिङ स्टेसन राख्न मिल्ने जग्गा उपलब्ध गराउने यस्ता सार्वजनिक स्थलमा प्राधिकरणले नै चार्जिङ स्टेसन बनाइदिने रिजालले जानकारी दिए ।
एनएमबी बैंकले जग्गा दिने
चार्जिङ स्टेसन राख्न मिल्ने ठाउँ उपलब्ध गराइदिन प्राधिकरणले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा एनएमबी बैंकले प्रस्ताव गरेको छ । उसले आफ्नो पार्किङस्थलमा चार्जिङ स्टेसन राख्न जग्गा दिने प्रस्ताव गरेको छ । एनएमबी बैंकसहित अन्य केही सपिङ मलहरुले पनि प्रस्ताव गरेको प्राधिकरणले जानकारी दियो ।
कस्तो ठाउँमा राख्न मिल्छ चार्जिङ स्टेसन ?
चार्जिङ स्टेसन राख्नको लागि कम्तिमा ५० वटा गाडी राख्न मिल्ने ठाउँ भने हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तै चार्जिङ स्टेसन राख्नको लागि सामान्यखालको ३ वटा दराज अट्ने जति जग्गा हुनुपर्ने इन्जिनियर रिजालले जानकारी दिए ।
यसको साथै चार्जिङ स्टेसन बनाउनको लागि २ सय केभीको ट्रान्समिसन हुनुपर्छ र ११ हजार भोल्टको विद्युत आवश्यक हुन्छ ।
पैसा दिन एडीबी पनि तयार
विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन बनाउनको लागि लाग्ने खर्च कसले दिने भन्ने अझै तय भएको छैन । सरकारले यसको लागि बजेटको व्यवस्था पनि गरेको छैन ।
बजेटका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय (उर्जा मन्त्रालय) मार्फत कुरा अगाडि बढेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । करिब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिए पनि कहाँको स्रोत प्रयोग गरेर बनाउने भन्ने अझै यकिन भएको छैन ।
तर, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) पनि चार्जिङ स्टेसन बनाउनको लागि बजेट दिन तयार रहेको रिजालले जानकारी दिए । एडीबीले दिने पैसा अनुदान हुने वा ऋण हुने भन्ने बारेमा टुंगो भने लागेको छैन ।
एक स्टेसनमा ३ वटा चार्जिङ गन
प्राधिकरणले बनाउन लागेको प्रत्येक चार्जिङ स्टेसनमा ३ वटा चार्जिङ गन रहने रिजालको भनाइ छ । त्यसमध्ये ६० किलोवाटका २ वटा डिसी चार्जिङ गन र ३० किलोवाट क्षमताको एउटा चार्जिङ गन रहने छन् ।
कस्ता गाडीको चार्ज हुन्छ ? कति समय लाग्छ ?
अहिले चलेका विद्युतीय सवारीमा २४ किलोवाटदेखि ६० किलोवाट क्षमतासम्मका व्याट्री छन् । ब्याट्रीको क्षमता र उसमा भएको चार्जको अवस्था अनुसार कति समयमा चार्ज भइसक्छ भन्ने तय हुन्छ । सामान्यतः एक घण्टामा फूल चार्ज हुन सक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
अहिले विश्व बजारमा भएको विद्युतीय गाडीमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत गाडी युरोपियन, जापानी र चाइनिज प्रोटोकलका गाडी छन् । यी तीनै प्रकारका गाडीको चार्ज गर्न मिल्ने स्टेसन बनाउन लागिएको रिजालले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २५, २०७६, ०६:०१:००
बजेटमा हेपियौँ, अब आन्दोलनमा जान्छौँ : ऊर्जा व्यवसायी
दाना-कुश्मा खण्ड प्रसारण लाइन असारभित्र संचालनमा ल्याइने
शिव सत्याल शिव सत्याल
यस कारण ठीक छ रवि लामेछानेको ‘द लिडर’
कर्जाको ब्याजमा बैंकका बदमासी: आधार दरमा साढे ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम
विशिष्ट कर्मचारीलाई जागिर नछोड्दै अर्काे नियुक्तिको हतारो
जग्गा दियो–ऋण लियो, पैसा खायो–जेल पठायो